Niseho niserana tao amin’ny tranonkala voajirika an’ny governemantan’i Trinité sy Tobago i Guy Fawkes · Global Voices teny Malagasy
Niseho niserana tao amin'ny tranonkala voajirika an'ny governemantan'i Trinité sy Tobago i Guy Fawkes
Voadika ny 07 Aogositra 2019 7:05 GMT
Pikantsarin'ny tranonkalan'ny Ministeran'ny Fizahan-tany ao Trinité sy Tobago nolotoina, nozarain'ny mpijirika VandaThe God.
Ny 25 Jolay, voajirika ny habaka tranonkala lehibe an'ny governemanta ao Trinité sy Tobago, anisan'izany ny an'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena, ny Sampana Fifindramonina sy ny biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana.
Maro tamin'ireo pejy voajirika no nampiseho ny sarin'olona iray manao sarontavan'i Guy Fawkes ary milanja sora-baventy mivaky hoe: “Miaraha amin'ny Revolisiona: lazao ny Governemantanareo mpanao kolikoly hoe HANO NY T **!” sy niaraka tamin'ny lohateny hoe “Voajirik'i VandaTheGod.”
Four more Trinidad and Tobago Government websites defaced https://t.co/VdiPlc02ZC pic.twitter.com/hepcE5dXQF
— Trinidad and Tobago Computer Society (@ttcs) July 25, 2019
Jereo eto ny tranonkalan'ny Governemanta maromaro ao Trinité sy Tobago nolotoina
Nametraka an'i VandaTheGod ho mpijirika amin'ny satroka mainty sady mavitrika nahavita nandoto pejy maro ny fikarohana tao amin'ny aterineto. Nisioka ireo rohy sy ireo pikantsarin'ny zavabitan'izy ireo amin'ny fijirihana ny kaontin'i VandaTheGod ao amin'ny Twitter. Ahitana rohy mankany amin'ny fanambarana nataon'ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena ao Trinité sy Tobago, Stuart Young izay nanamafy ny fijirihana ireo lohahevitra naverin'ilay kaonty nandefasana sioka indray omaly .
Namoaka ny tantara manoritsoritra an'i VandaTheGod eo amin'ny lohatenim-pejy ho toy ny “ekipan'aterineto Breziliana manam-pahaizana manokana momba ny fijirihana habaka tranonkala sy ny famoahana hafatra politika” ny Guardian ao Trinité sy Tobago.
Hita nibaribary nalaza tao amin'ny lisitry ny pejy nolotoin'ny mpijirika ny an'ny governemanta Breziliana sy ireo habaka tranonkala hafa izay nahitana ohatra avy amin'ny firenena hafa, anisan'izany i Bhutan, Alemaina, Italia ary Paortiogaly. Nanamafy tao anatin'ny antsafa tamin'ny finday niaraka tamin'ny Global Voices i Dev Anand Teelucksingh, mpanorina ny Trinidad and Tobago Computer Society (TTCS), izay mitsongo dia ireo zavabitany fa namorona dikan-teny Paortiogey amin'ny rafi-pikirakirana Ubuntu Linux ireo mpijirika saingy tsy afaka hanamarina ny toerana hanaovan'ny mpijirika ny asany .
Nilaza i Teelucksingh fa nahamarika ny fijirihana ny mpikambana ao amin'ny TTCS—ny andiany voalohany tany Trinité sy Tobago—manodidina ny mitatao vovonana tao amin'ny kaontin'i VandaTheGod ao amin'ny Twitter. Nitatitra ny TTCS fa habaka tranonkalan'ny governemanta miisa 11 no nolotoina tamin'ny tamin'ny 9 ora sy sasany ora any Trinité sy Tobago ny 25 Jolay ary nilaza i Teelucksingh fa nisy maro hafa ihany koa voakasika nanomboka teo.
Nanome toky ny Minisitra Stuart Young tamin'ny fanambarana nataony fa “tsy tena nisy ny fahasimbana”. Hoy izy:
“these web sites don't get into our operating systems, these web sites are not going to affect the records of national security and not the records of immigration either. So there is no reason to be overly concerned about intentional attacks on data that exists in those two very important places.”
“Tsy miditra amin'ny rafi-pikirakiranay ireo habaka tranonkala ireo ary tsy hisy fiantraikany amin'ny arsivan'ny fiarovam-pirenena na ny arsivan'ny fifindra-monina ihany koa. Noho izany dia tsy misy antony tokony hiahiahiana be loatra momba ny fanafihana iniana natao amin'ny angondrakitra any amin'ireo toerana roa manan-danja ireo. “
Nilaza i Teelucksingh fa tsy mampino azy ny fanaovana lasibatra ny governemanta noho ny fikasana hanaovana haratsiam-panahy manokana . “Heveriko fa nahitan'izy ireo ny faharefoana ity tranga iray ity ary nohararaotin'izy ireo izany,” hoy izy. “Fomba fanao efa mahazatra izany.”
Nahatsikaritra i Teelucksingh fa mampiasa Windows Server 2012 avokoa ireo tranonkala rehetra voajirika ary novolavolain'ny orinasa ao Trinité antsoina hoe Digital Business izay manana tranonkala araka ny filazan'i Teelucksingh fa efa nampiseho vonjimaika ny pejy manga hamantarana ny Windows IIS Server nitovy tamin'izany izay nasehon'ireo tranonkalan'ny governemanta voajirika nandritra ny ampahatelo voalohany tamin'ny andron'ny 26 Jolay. Miantrano ao Trinité sy Tobago ny sasany amin'ireo tranonkalan'ny governemanta ireo ary any Etazonia sy Kanada ny hafa. Tsy nisy tamin'ireo habaka tranonkalan'ny governemanta ao Trinité sy Tobago izay voakasik'izany no hita fa nampiasa ny HTTPS izay arofenitra malaza be mpampiasa hiarovana ny fifandraisana ary heverina fa tsara indrindra ampiasaina.
Tsy nisokatra ny tranonkalan'ny Minisiteran'ny Fiarovam-pirenena sy ny Departemantan'ny Fifindra-monina tamin'ny 4:00 ora tolakandro tany Trinité sy Tobago .
1 herinandro izayJamaika
Renirano sy lalandriaka ao Jamaika, mijaly noho ny fanararaotana
3 herinandro izayJamaika
Donin'ilay Jamaikana mpanatontosa filma ireo indostria mpanao fitrandrahana ao Karaiba